Inyoka Game 🥇 Faka futhi Jabulela kusuka Emulator.online
Snake Game: indlela ukudlala igxathu negxathu? 🙂
Ukudlala i-backgammon online mahhala, kalula landela le miyalo yesinyathelo ngesinyathelo:
Isinyathelo 1 . Vula isiphequluli sakho osithandayo bese uya kuwebhusayithi yegeyimu Emulator.ku-inthanethi
Isinyathelo 2 . Ngokushesha nje lapho ufaka iwebhusayithi, umdlalo uzovele uboniswe esikrinini. Kumele uchofoze nje Play futhi ungaqala ukukhetha ukucushwa okuthanda kakhulu. Uzokwazi ukukhetha phakathi kwemodi yakudala nemodi yesithiyo (i-adventure) . 🙂
Isinyathelo 3. Lapha izinkinobho ezithile eziwusizo. Ungakwazi " Faka noma susa umsindo ", cindezela u-" Play "inkinobho bese uqala ukudlala, unga" ikhefu "futhi" Qala kabusha "nganoma yisiphi isikhathi.
Isinyathelo 4. Ukunqoba umdlalo kufanele uchithe ukulandelana kwamabhola anemibala ngokuphonsa amabhamuza. Uma uhlanganisa ezintathu noma ngaphezulu zombala ofanayo, ziyasuswa.
Isinyathelo 5. Ngemuva kokuqeda umdlalo, chofoza "Qala kabusha" ukuqala phansi.
Uyini Umdlalo Wezinyoka? 🐍
The Inyoka Game ngumdlalo omakhalekhukhwini, ama-video consoles nama-computer, lapho i Inhloso eyinhloko ukuqondisa ikhanda lenyoka esikrinini , izama ukudla ama-apula asatshalaliswa ngokungahleliwe endleleni yawo. Ukuze ungalahli, kufanele ugweme ukushaya izindonga nomsila wenyoka.
Ukuba lula kwayo kwenza kube umdlalo okhetheke kakhulu. Udinga kuphela ukusebenzisa imicibisholo kukhibhodi yakho ukuqondisa inyoka ekunqobeni.
Umlando womdlalo 🤓
Inyoka yazalwa njengeBlockade ngo-Okthoba 1976 . Emdlalweni wokuqala ububhekene nezinye izimbangi.
Inhloso bekuwukuba izitha zakho zishayisane nawe noma nazo ngenkathi umile. Ungahambisa ama-degree angama-90 ekunyakazeni ngakunye futhi kulokhu ubenezinkinobho eziqondisayo zakudala.
Enguqulweni edume kakhulu yeNyoka Game, okuhlukile okufanele sikunake futhi okuyisitha sethu yithi uqobo, ngoba thina ingashayisana nanoma iyiphi ingxenye yethu uma singanakile.
Izinguqulo zeBlockade neNyoka zaziziningi. I-Atari idale izinhlobo ezimbili ze-Atari 2600, Dominos futhi Kaka . Ngokwengxenye yayo, inguqulo ebizwa ngokuthi Worm yahlelelwa i- Amakhompyutha we-Commodore ne-Apple II .
Futhi ngo-1982 umdlalo osihloko sithi UNibbler wadedelwa , inkanyezi inyoka esimweni esikhumbuza ilebula le-Pac-Man (1980).
Okuhlukile, Amabibi (1991) yathunyelwa nge-MS-DOS njengohlelo lwesampula lwe-QBasic. Futhi ngo-1992, inguqulo ebizwa ngokuthi Umjaho we-Rattler ifakiwe neMicrosoft Entertainment Pack yesibili, iqoqo lemidlalo, eminye yayo ihlanganiswe nezinguqulo ezilandelanayo zeWindows, njengeMinesweeper noma iFreeCell.
Ngalesi siqalisi, akumangazi ukuthi AbakwaNokia babheja iBlockade / Snake / Nibbler njenge ezenzakalelayo game ngezingcingo zabo zakwaNokia. Izinto eziguquguqukayo bezilula futhi zilutha umlutha, bekumnandi, futhi nezidingo zobuchwepheshe bezicacile.
Izinhlobo Zenyoka Game .️
Snake Game kuyinto zakudala umdlalo weselula nowekhompyutha wangaleso sikhathi, ngakho-ke akufanele kusimangaze ukuthola okuhlukahlukene okuningi kwalo mdlalo . Isizathu esenza iqhubeke nokuvuselelwa ngamandla ayo okulutha nokulula lapho idlala, futhi azisekho izizathu zokuqhubeka ukuyifaka emakethe.
Ngakho konke lokhu, umdlalo owadalwa ngeminyaka yama-70s awukhohliwe, futhi sizokhuluma ngokuhluka okumbalwa koMdlalo Wezinyoka.
Inyoka yeNokia 1
Kuyinto Inyoka yoqobo yenziwe kabusha ngeNokia S60. Le nguqulo okukhulunywa ngayo lapho sisho ukuthi besidlala i-Snake Game kuselula yethu.
Inyoka Inyoka Yoqobo . YiNyoka ehambisana nezingcingo ze-iPhone. Kule nguqulo bebefuna ukuyinika ifayela le- ukubukeka kokuvuna eyayinayo kuma-mobiles okuqala.
I-TiltSnake . Sebenzisa i-accelerometer.
Inyoka Ehambayo. Inyoka yakudala ye-iPhone ne-iPod touch.
GeoSnake. Le nguqulo inomsebenzi omusha ohlukile kulokho esivame ukukubona, futhi lokho ukuthi unemisebenzi emisha oyisebenzisayo amabalazwe ahlukahlukene ezindawo.
Inyoka Yangempela. Igcina ihluzo ze-mobiles ezindala zithembeke ngangokunokwenzeka.
Futhi nezinduduzo ezidume kakhulu, ezinehluzo nezici ezingalingani nama-90s, azikwazanga ukumelana nazo bekhipha uhlobo lwabo loMdlalo Wezinyoka . Zonke zifake okuthile okusha kunguqulo yazo entsha, kepha zigcina ingqikithi yazo yeNyoka Game. Phakathi kwazo kukhona i-PSP, i-Play Station 3, i-WII, i-Nintendo DS ne-Xbox 360.
Inyoka igcinwa kakhulu elula kokubili ngumbono futhi maqondana nokudlalwa kwegeyimu. Kugxilwe enyokeni abadlali abangangena kuyo izinkomba ezine: kwesobunxele, kwesokudla, phezulu naphansi .
Amaphikseli (ama-apula) avele ngokungahleliwe esibukweni futhi kufanele ibanjwe ngekhanda lenyoka. Ngokusetshenziswa kwe-pixel ngayinye, hhayi kuphela amaphuzu omdlali, kodwa futhi nobude obuphelele bomugqa ngeyunithi eyodwa.
Ngakho-ke, isikhala esikrinini siya ngokuya sincipha futhi sincipha, nakho okwandisa izinga lobunzima ngokuqhubekayo. Umdlalo uphela lapho inyoka ithinta onqenqemeni lwenkundla yokudlala noma umzimba wakho.
Njengakudala kwe-arcade, inyoka inikezwe ngokuhlukahluka okuningi njengegeyimu ye-inthanethi iminyaka eminingana. Ngokuya ngokuhlukahluka, kubekwa izithiyo ezingeziwe endleleni yabadlali ukwandisa izinga lobunzima.
Ukuze unike amandla inani eliphelele lamaphoyinti, amaphuzu ebhonasi kungeziwe kwezinye izinhlobo.
Into ehlekisayo nge game ukuthi ukusebenza kwayo elula, futhi akubonakali sengathi kuyadingeka ukuthi basitshele noma yiliphi iqhinga lokugwema ukushayisa. Ekupheleni kosuku sinesikrini sonke sokujikeleza ngokungapheli. Kepha kwenzeka okufanayo kithi njalo, sizicupha ngaphakathi eyenyoka umzimba ngaphandle kwanoma iyiphi indlela yokuphuma lapho.
Awu, ungalindeli amaqhinga ezimpilo ezingapheli noma ukuthi ungenza kanjani ucezu lweNyoka yethu lunyamalale ngendlela eyisimangaliso, cha. Lokhu okunye amathiphu alula okufanele uwagcine engqondweni uma sifuna inyoka yethu ikhule ingabambeki ngaphakathi kuyo.
Ekuqaleni, kulula kakhulu ukuhambisa esikrinini nge okungenasisekelo amazombe ngoba sinesikhala esiningi, kepha kuyeza isikhathi lapho lokhu kungenzeki ngenxa yobukhulu beNyoka yethu.
Lapha sincoma ukuthi uhlale uqala njalo ajike inyoka isuke ngaphakathi iye ngaphandle , ngale ndlela uzokugwema ukushiya ikhanda libhajwe phakathi komzimba.
Lo ngumsebenzi oyinhloko weNyoka yethu, kufanele idle ama-apula ukuze ikhule. Nali elinye iphutha elejwayelekile, futhi yilokho akufanele uye ngqo kubo ngaphandle kokukhumbula iseluleko sokuqala. Gcina umzimba weNyoka ulawulwa ngaso sonke isikhathi, ngoba uma kungenjalo, cishe uzogcina ushayisana nengxenye yomsila.
Uma kunesidingo, sketi i-aphula uze ube nesiqiniseko sokuthi uyakwazi ukulawula yonke inyoka yakho.
Ubuwazi lo mdlalo? Siyethemba ukuthi njengoba unendaba yalo mdlalo nendlela yokudlala, uzobona ukuthi kanjani okuthakazelisayo kungaba khona.
Unalo mdlalo otholakala khona lapha futhi mahhala, ngakho-ke azikho izaba zokuqala ukudlala nokuchitha amahora ethe njo kusikrini.
Imidlalo ebukhoma emide!